महेन्द्रनारायण निधि जस्ले निष्ठाका लागि छाेराकाे समेत सिफािरिस गरेनन् - हिमाल दैनिक
भलै यसबाट केही समय मेरा लागि घाटा भयो होला तर, उहाँको राजनीतिक निष्ठामा मैले प्रश्न उठाउनु हुँदैन
१३ फाल्गुन २०७४, आईतवार १४:५०
आजको नेपाली समाजमा खेतीमा मनसुन र अरु क्षेत्रमा भनसुनकै दबदबा छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व अथवा पहुँचवालाको भनसुनवीना कहि केही हुँदैन।
तर आजभन्दा झण्डै चार दशक अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्रनारायण निधि यस्ता पात्र थिए, जसले अरुका लागि त परै जाओस, आफ्नै जेठोे छोराको भविश्यका लागि समेत भनसुन गरिदिएनन्।
उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि भारतीय राजदूतलाई भनिदिन छोराले गरेको आग्रहलाई अस्विकार गर्दै उनले निधिले भनेका थिए रे, ‘तिमीले आवेदन फारममा बाबुको नाम उल्लेख गर्दा मेरो नाम लेखेका छौ भने त्यहि मेरो सिफारिस हो। गर्छन भने त्यहि नाम हेरेर गर्छन होइन भने म चाकरी गरेर कसैलाई भन्दिन।’ बाबुले सिफारिस नगरिदिँदा केहि समय आफ्नो पढाई प्रभावित भएपनि अहिले छोरा नवेन्द्रलाई कुनै गुनासो छैन। बाबुको त्यो अडान उनले लिएकोे मूल्य, मान्यता र आदर्शको नमूनाका रुपमा लिएका छन्। बाबुकोे ९७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा नवेन्द्र निधिसँग हिमाल दैनिकले गरेको कुराकानीको अंशः
यहाँले आफ्नो पिताजीलाई कसरी सम्झनु भएकाे छ?
पिताजीलाई हामीले सुरूदेखिनै पार्टीकै काममा लागेको अवस्थामा देख्यौं। हामी केटाकेटी छँदै २०१५ सालको चुनाव भयो,त्यसपछि उहाँ उपसभामुख बन्नुभयो। हामी पनि उहाँसँगै काठमाडौं गयौं।
त्यहिबीचमा १७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे। त्यसपछि हामी पिताजीसँगै जनकपुर फर्कियौं। उहाँ राजाको कदमविरुद्धका गतिविधिमा लागेपछि उहाँ फेरि जेल पर्नुभयो। उहाँको जीवन नै राजनीतिक संघर्षमा बित्यो।
जीवनभर राजनीतिक संघर्षमा लाग्ने पिताजीबाट बाल्यकालदेखि युवा अवस्थासम्मको समयमा यहाँहरुले उहाँबाट पाउनुपर्ने अभिवाकत्वको अभाव कहिल्यै महसुस भयो कि भएन?
उहाँको अभाव कहिल्यै खड्किएन। भलै उहाँ हामीसँग हुनु हुन्नथ्यो तर, उहाँले परिवारको लालन, पालन, पठन पाठन गराउने सवालमा हामीलाई कहिल्यै अभाव महसुस हुन दिनु भएन।
उहाँले परिवारलाई भन्दा राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी राजनीतिलाई बढी महत्व दिनु हुन्थ्यो भन्ने कुरा कति सत्य हो?
उहाँले पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिलाई बढी महत्व दिने विषयमा शंकै थिएन। तर पनि परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने कुरामा उहाँले कहिल्यै वेवास्ता गरेको मेरो जानकारीमा छैन।
पार्टीले लिएको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको मुद्दा उहाँले परिवारमा पनि लागू गर्नुभएको थियो। त्यसमा कुनै कमि थिएन। आन्दोलनका क्रममा उहाँले त्यतिबेला तराईमा व्याप्त खडेबटैया आन्दोलन (खेत जोत्ने, कमाउने जसलाई हामी अहिले मोही भन्छौँ, उसले त्यतिबेला जोतेर पनि अत्यन्त न्यून हिंशा पाउने गर्दथे उनीहरुका लागि कमाइको आधा हिस्सा पाउनुपर्छ) भन्ने कुरा व्यवहारमा लागू गराउनु भयो।
तपाईँको विद्यार्थीकालमा उच्च शिक्षाका लागि भारतीय दूतावासमा आवेदन दिएपछि राजदूतलाई भनसुन गरिदिन गरेको आग्रह नमान्दा आफूले चाहे अनुसार पढ्न जान पाउनु भएन भन्ने कुरा कत्तिको सत्य हो?
हा, हा, हा,। हो, उहाँले भन्नु भएन।
एउटा बाबुले भनिदिएमा हुने कुरा पनि नभन्ने विषयलाई कसरी लिनु भएको छ?
यो बुबाको नैतिक अडान हो। उहाँको जुन राजनीतिक मूल्य मान्यता र विश्वास थियो, त्यो हिसाबले उहाँ कहि कतै चुक्नु भएन। भलै यसबाट केही समय मेरा लागि घाटा भयो होला तर, उहाँको राजनीतिक निष्ठामा मैले प्रश्न उठाउनु हुँदैन।
ईन्जिनियरिङ पढ्न आवेदन दिएको तर बुबाले भनसुन नगरिदिएपछि कसरी पढ्नु भयो?
त्यो बेला मेरो नाम अर्को विषयमा निश्किएको हो। तर मैले चाहेको विषयमा पढ्न बुबाले भनसुन गरिदिनु भएन। त्यसपछि मेरा साथीहरु भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा गएर पढे। मैले ३६ सालको आन्दोलनपछि काठमाडौं गएर अमृत साइन्स क्याम्पस भर्ना भएर राम्रोसँग पढेँ।
तपाईको बुबा र भाइ विमलेन्द्र राजनीतिमा लागे पनि तपाईँ नलाग्नु कतै राजनीतिप्रतिको वितिष्णाले हो कि?
यसमा पुरानो कुरा छ। स्कूलमै छँदाखेरी जब हाम्रो बुबा पञ्चायत विरोधी राजनीतिमा लागेको कारण हामीले कहि पनि स्थान पाउँदैनौँ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसपछि सबै भन्दा राम्रो शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हुनु हो भन्ने लाग्यो। किनभने योग्यता भयो भने अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने विश्वास मसँग थियो। त्यसैले म शैक्षिक पेशामा लागेँ।
तपाईँहरूलाई बुबाले जीवनमा के शिक्षा दिनु भयो जसले गर्दा तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा अहिलेसम्म सम्झिनु भएको छ?
बुबाले लिनु भएको सादा जीवन उच्च विचारको दर्शनमा आधारित निष्ठा र नैतिकताबाट कत्ति पनि नडगमगाउने निर्भिक स्वभावले हाम्रालागि प्रेरणाको स्रोत हो। उहाँले गान्धीवादी जीवन शैली थियो। उहाँले देखाउनु भएकै बाटोमा म लागिरहेको छु। उहाँले हामीलाई जे गर्नु भयो त्यो हाम्रो जीवनका लागि अमूल्य योगदान थियो।
Prevपछिल्लोराजविराज क्याम्पसमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी
अघिल्लोदुई वर्षमा पनि बनेन १,२०० मिटर नहरNext